Auto Air Block manamboatra milina PSB2000-6000F
1. Masinina misy firafitra matanjaka.
2. Ampiasao ny fanaraha-maso PLC ary kitiho ny efijery, mihazakazaka mandeha ho azy.
3. Ampidiro hopper mahery.
4. Mampiasà fiteny fandidiana hafa, mora ampiasaina kokoa ho an'ny mpiasa.
5. Mampiasà rafitra mandeha sy mavesatra mandeha ho azy.
6. Mampiasà faritra tsara kalitao.
7. Mety amin'ny fanaovana vokatra ambany sy ambany.
Auto Vacuum Block Moll Machine PSB2000-6000Z
4. Vovona mahomby avo lenta mba hanaovana vokatra tsara kalitao.
5. Mampiasà fiteny fandidiana hafa, mora ampiasaina kokoa ho an'ny mpiasa.
6. Mampiasà rafitra mandeha sy mavesatra mandeha ho azy.
7. Mampiasà faritra tsara kalitao.
8. Mety amin'ny fanaovana vokatra ambany sy hakitroka ambany.
3. Mampiasà tongotra matanjaka hisolo ny lampihazo ao amin'ny ozin'ny mpanjifa.
6. Hopper mitsangana roa hameno haingana kokoa ny fitaovana.
Masinina mamolavola endrika EPP
Ny fananganana vy vita amin'ny vy dia voahitsaky ny fanamoriana hafanana avo lenta, ny fitsaboana ny hafanana, ny vovonan'ny sandbast ary nafafin'ny loko fanoherana ny loto.
Ny rafitra fanaraha-maso dia mandray ny efijery fikitika Japon PLC sy Anglisy ho an'ny fandidiana mora foana ary ny famokarana mandeha ho azy tanteraka.
Milina avo lenta sy miorina amin'ny milina, toy ny valizy zoro-seza Burkert.
Ny fitsitsiana angovo amin'ny alàlan'ny haben'ny milina noforonina tsara, ny tsipika fantsom-pahatsapana mba hahatsapa ny fitomboan'ny tsindry etona haingana sy mihena.
Fiaramanidina hydraulic mikoriana avo miaraka amin'ny varingarina hydraulic roa, izay mahatonga ny masinina mihazakazaka ary mihidy mafy.
Ny milina dia azo ampitaina amin'ny rafitra banga manamboatra trano, ary misy koa ny fidirana amin'ny rafitra fantsona afovoany.
Efitra fisakafoanana roa sosona amin'ny famahanana haingana mba hanafohezana ny fotoana tsingerina.
Valizy mandanjalanja amin'ny fifehezana etona azo antoka.
Ny tongotra masinina mifono zinc dia tsy voatery ho an'ny mpanjifa amin'ny fametrahana milina amin'ny tany manokana.
Ny tongotra sy ny lampihazo dia tsy voatery.
EPP (Polypropylene nitarina)
EPP (Expansion Polypropylene) dia karazana fitaovana vita amin'ny polymer / gazy vita amin'ny kristaly avo lenta, miaraka amin'ny fahombiazany tsara mba ho lasa fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana mitombo haingana indrindra. Fahombiazana lehibe 1.Fandraisana an-tsokosoko: satria ny vokatra EPP dia manana rafitra pore bubble manokana, afaka mandray ny angovo avy any ivelany amin'ny fomba mahomby izy io, ary afaka manohitra an-gazety tsara. 2.Recycling: ny vokatra EPP azo ampifanarahana tsara dia azo ampiasaina miverimberina fa tsy mora vaky. Data ara-teknika ...
Endri-javatra lehibe 1.Ny fitaovan'ny vatana dia mampiasa vy mahery mifangaro vy, aorian'ny fizotry ny fizotrany, fanodinana fasika, hahazoana antoka fa manana rafitra matanjaka ny masinina, tsy mahazo harafesina ary mampitombo ny fiainana miasa ao amin'ilay masinina. Fanaraha-maso ny efijery Schneider. Ny fizotry ny famokarana manontolo dia mandeha ho azy. 3.Machine miaraka amin'ny rafitra fahana tosika avo lenta, famahanana lasitra haingana, ny milina dia afaka mametraka 36 pcs mameno basy 4.Machine miaraka amin'ny ...
SPY70 \_ 90 \_ 120 Pre-expander mitohy
Endri-javatra lehibe 1.Feeding, expander, filtrating, crushing, transport to silos automatiquement 2 miaraka amin'ny fanitarana voalohany sy faharoa, ny fotoana voalohany namenoana ny fitaovana fihinanana fiovam-po matetika, manome antoka ny fahamarinan-tsakafo 3.Uniform foaming, foam density range is 6- 35g / l 4. barila ara-materialy ao anatiny sy ivelany, fanamainana fandriana nohosorana vita amin'ny vy tsy misy fangarony, mba hitazomana ny fampiasana maharitra sy ny fahombiazan'ny fahita 5. fitaovana fiarovana herinaratra 6.Adopt japoney mampihena
Endri-javatra lehibe 1.Feeding, expander, filtrating, fitaterana mankany silos ho azy 2.Steam rafitra fehezin'ny tsindry mampihena tsindry sy valizy seza zoro, hahatratrarana fanafanana marina 3.Ny rafitra fiompiana dia mampiasa rafitra mandanjalanja elektronika, fanaraha-maso ny haavon'ny sensor, mba hifehezana fahafaha-manao fitaovana mihosin-javatra, mba hahazoana antoka fa milanja mitovy ny foam foam 4.Mampiasà maso PLC sy efijery mikasika, hahatratra ny fandidiana mandeha ho azy 5.Feed barila vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Fitaovana elektrika, valves ar ...